Ka saar summad -biyoodka: barnaamijyada iyo mareegaha si looga saaro | Hal -abuureyaasha Online
Kaar astaanta biyaha
Encarni Arcoya | 09/09/2021 18:07 | Qalabka Naqshadeynta
Internetku waa aalad laba af leh. Waxaad soo bandhigi kartaa shaqooyinkaaga, ama waxaad arki kartaa sida ay ku dambeeyaan xatooyada iyo ka helidda sumcad qof kale. Sababtan awgeed, farshaxan -yahanno badan ayaa adeegsada biyo -calaamad si ay u soo geliyaan sawirro, sawirro iyo sawirro shaqadooda iyagoo isku dayaya inay joojiyaan 'tuuganimada'. Laakiin marka sharciga la sameeyo dabinka ayaa la sameeyaa. Oo waxaa jira siyaabo looga saaro summad -biyoodka.
Waa inaan caddeyno inaan ku bari doonno sida looga saaro summadaha biyaha, laakiin maaha si aad ugu tagto waxyeellada qof kale, adoo xaday shaqadooda. Xaaladahaas waxaa fiican inaad la hadasho qofka qoraaga ah.
1 Waa maxay astaan-biyood?
2 Ma sharci baa in meesha laga saaro summad -biyoodka?
3 Sida looga saaro summad -biyoodka
3.1 Bixiye Watermark
3.2 Saariyaha PhotoStamp
3.3 Ka saar astaanta summada leh Photoshop
3.5 Saamaynta sawirka
Waa maxay astaan-biyood?
Summad -biyoodka ayaa sidoo kale lagu yaqaan magaciisa Ingiriis, watermark. Waa aalad farshaxan -yahannadu ku ilaaliyaan shaqooyinkooda. Waxay ku saabsan tahay in lagu soo bandhigo sawirkaas astaan, sawir, sawir, qoraal ... kaas oo tilmaamaya cidda leh sawirkaas. Si kale haddii loo dhigo, waxay u shaqaysaa sida saxiixa qoraaga si uusan qofna u xadin shaqadaada.
Calaamadahaan biyo -mareenka ah waxaa lagu gartaa inay had iyo jeer noqdaan kuwo hufan ama midab u dhigma kan sawirka, maadaama, in kasta oo loogu talagalay in la arko, looguma talagalin inay hor istaagto ama saamayso natiijada sawirka.
Ma sharci baa in meesha laga saaro summad -biyoodka?
Kahor intaanan kuu sheegin inaan ku bari doonno sida looga saaro summad -biyoodka. Laakiin sidoo kale waxaan rajeyneynaa inaadan sameynin iyadoo ujeedadu tahay inaad xado shaqada qof kale. Haddaba calaamadeynta summadu ma sharcibaa mise ma aha?
Jawaabtu ma aha mid fudud sidaad u malaynayso. Waxayna ku xiran tahay ujeeddada aad ka leedahay sawirkaas. Haddii aad tirtirto sababta oo ah waxaad u adeegsan doontaa ujeedo shaqsiyeed (tusaale ahaan, samaynta funaanad, ku dhejinta boosta qolkaaga, iwm.) Markaa caadi ahaan wax dhib ah malahan. Hadda, ka warran haddii halkii aad ka samayn lahayd funaanad waxa aad rabto ay tahay in lagu sawiro sawirkaas si ay u sameeyaan funaanado oo aad is tusi karto? Maxaa dhacaya haddii aad u adeegsanayso daboolka boodhadhka adduunka, ama daboolka buugga? Waxaa durbaba jira ujeedo ah in laga faa'iidaysto sawir aan adiga ahayn, taasina waxay ku gelin kartaa dhibaato maxaa yeelay qoraaga laftiisu wuxuu kugu dacweyn karaa adeegsiga sawirkiisa isaga oo aan haysan oggolaansho (iyo isaga oo aan lacag bixinba).
Sida looga saaro summad -biyoodka
Marka xigta waxaan ku siin doonaa tusaalooyin dhowr ah barnaamijyada ka saari kara summadaha oo aan kuu soo bandhigo sawir la mid noqon doona kan sumadda leh, laakiin aan lahayn.
Qalabkan Apowersoft waa midka ugu fudud uguna fudud in la isticmaalo. Waxay ku salaysan tahay dhalanrog iyo jilcin si aan summaddu mar dambe ugu muuqan sawirrada.
Nidaamku waa mid aad u fudud:
Waxaad u gelisaa sawirka aaladda.
Waxaad hadheysaa aagga ay summaddu ku taal.
Waxaad siisaa si loogu badalo. Qalabku wuxuu bilaabi doonaa inuu si otomaatig ah u shaqeeyo adigoon waxba qaban. Ilbidhiqsiyo gudahood waxay ku siin doontaa sawirka iyada oo aan lahayn summad -biyoodka.
Ikhtiyaar kale oo aad haysato, aad u fudud in la isticmaalo oo degdeg ah, waa kan. Si tan loo sameeyo, waa inaad:
Ku soo dhaji sawirka leh summadaha biyaha barnaamijka.
Dooro qaybta ay summaddu ku taal.
Ku dhufo badhanka Delete. Ha welwelin, ma tirtiri doonto sanduuqaas, laakiin waxay daryeeli doontaa tirtiridda iyadoo ka tagaysa sawirka intiisa kale.
Ma kuu sheegi karno inay noqon doonto mid kaamil ah, maxaa yeelay marmarka qaarkood waa run in ay jiri karto nabar yar oo, iyadoo la og yahay inay halkaas wax ku jireen, aad kaaga argagaxdo markaad aragto. Laakiin haddii aad aragto inay u muuqato mid xun, waxaad isku dayi kartaa barnaamijyo kale.
Ka saar astaanta summada leh Photoshop
Mid ka mid ah barnaamijyada tafatirka sawirka ugu caansan adduunka waa Photoshop. Oo sida iska cad barnaamijku wuxuu kaloo kaa caawin karaa inaad ka saarto summadaha biyaha. Waa maxay tillaabooyinka la qaadayo? Xusuusnow:
Ku soo rar barnaamijka sawirka si uu ugu furmo.
Dooro qalabka burushka bogsashada.
Xulo "ku saleysan waxyaabaha" sida ikhtiyaarka buuxinta
Hadda wax ka beddel dhumucda buraashka oo ku billow rinjiyeynta waxa ay tahay summaddu. Markaad sii deyso, waxaad arki doontaa in summad -dejintu ay baaba'ayso oo ay ka tagayso meeshii ay ahayd oo keliya.
Haa waa run in xoogaa la khafiifin karo, laakiin taasi way ka fiican tahay astaanta.
Barnaamij kale oo aad isticmaali karto si aad uga saarto summadaha biyaha waa kan Teorex. Si tan loo sameeyo, tallaabooyinka la qaadayo waa kuwan soo socda:
Ku fur sawirka barnaamijka.
Adeegso aaladda «Polygonal Lasso». Iyada oo ay tahay inaad doorato aagga oo dhan oo ay summaddu ku taal. Haddii ay aad u weyn tahay waxaa aad u fiican inaad ku samayso laba qaybood ama ka badan si aadan ugu buuxin pixels aad u badan maxaa yeelay waxaad yeelan doontaa natiijo ka fiican.
Markaad doorato, sanduuq cas ayaa soo muuqan doona. Waa inaad gujisaa "Delete" si barnaamijku u daryeelo ka saarista summadaha.
Waxa kaliya ee hadhay waa in la badbaadiyo natiijada.
Tani waa mid ka mid ah qalabka ugu fiican si meesha looga saaro calaamadaha, sidaa darteed haddii aad adeegsato khiyaanada aan ku siinnay, waxaad heli doontaa natiijo aan aad uga duwanayn tii hore.
Haddii aadan doonayn inaad ku rakibto barnaamij kombiyuutarkaaga oo aad rabto in dadka kale ka taxaddaraan inay kaa saaraan, waxaad haysataa dhowr qalab oo onlayn ah oo aad isticmaali karto. Mid iyaga ka mid ah waa Fotoefectos, oo ah summad -ka -qaadiyaha onlaynka ah.
Tallaabooyinka ay tahay inaad qaaddo waa:
Fur bogga shabakadda
Soo rar sawirka.
U sheeg waxaad rabto inaad samayso. Xaaladdan oo kale, waxa ay tahay inaad samayso ayaa tilmaamaysa inaad rabto inaad ka saarto summadaha.
Haddii aad gujiso xigta, waxay ku weydiin doontaa inaad tilmaamto aagga ay calaamad -biyoodku rabto inaad ka saarto. Guji Ka saar oo ilbidhiqsiyo gudahood waxaad heli doontaa natiijada diyaar u ah inaad soo dejiso.
hay ikhtiyaarro badan oo aad isticmaali karto kuwaas oo natiijooyinkoodu ka tayo fiican yihiin ama ka xun yihiin. Sawirka laftiisa ayaa waliba saameyn ku yeelan doona. Markaa haddii aad aragto in natiijooyinku aysan ku qancin, ha ka quusan oo isku day qalab kale si aad meesha uga saarto summad -biyoodka oo aadan u dareemin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Kaar astaanta biyaha